IGeofumadas-malunga nokuhamba kwalo mzuzu wedijithali -Geofumadas
Ikhaya/egeomates My/I-Geofumadas-kwimikhwa yalo mzuzu wedijithali
Ukuya Kwedijithali Kunokuluguqula njani Ucelomngeni lwakho lobuNjineli
Indawo ezixhumeneyo zedatha azithethi nje ngayo, zikwahamba nendlela kwiiprojekthi zakho zokwakha.
Phantse bonke ubungcali kwezobunjineli, kwezokwakha nakwezokwakha (AEC) zijolise ekufumaneni iindlela ezintsha zokwandisa imingcipheko kunye nokunciphisa uxanduva lokuphendula kumashishini abo. Ngenxa yokuba itekhnoloji ihamba ngokukhawuleza kakhulu, kunokuba nzima ngoba mininzi imithombo yolwazi ekhoyo. Iba yimeko yokwenza ixesha lokuyisebenzisa.
Kodwa inxibelelana njani nemarike yethu yemihla ngemihla? Omnye woogxa bam bafumana i-imeyile enomdla kakhulu evela kumthengi osebenzisa umnini-mzi:
“Owona mceli mngeni sinawo ngowokuba kubonakala ngathi iikontraka zithetha ngexesha lokunikezelwa kwekhontrakthi, kodwa ukuphunyezwa kwazo kuye kume njengoko ingeyonto iphambili kumaqela eprojekthi. Njengomphuhlisi ongumnini, sifuna ukuba yintshatsheli kunye neqabane kunye neekontraka eziya kuba ngabamkeli bokuqala kwaye babe namandla okuhambisa. ”
Kunzima ukufumanisa ukuba yeyiphi imisebenzi yokwakha ebonelela ngezi ntsuku. Ngaba yidatha yedatha, enikezelwe kumthengi ngaphandle kwedatha yembali okanye imethadatha eqhotyoshelweyo? incwadi yemveliso yezixhobo zoqobo ezinemifanekiso; okanye imizobo kunye nedatha enokungahambelani nempahla ebonelelweyo njengoko yakhiwe / yagqitywa?
Inkqubo emanyeneyo, enjengeProjekthiWise kunye neAssetWise, yimele ibe ngumnini weeasethi zalo naluphi na uhlobo lweprojekthi. Njengoko ndixoxile kumanqaku 3 no-4 kolu ngcelele (Indlela eyodwa yenyaniso enokuguqula ngayo ishishini loyilo lwezibonelelo kwaye kutheni kufuneka ilungelelanise inkqubo yoyilo, ngokulandelanayo), kungcono ukubandakanya inkqubo ngaphambi kokuba igqibe kakhulu.
Kukho iinkqubo ezininzi kwimarike, kwaye akukho namnye olingana zonke. Umzekelo, ukuba uneeprojekthi ezinkulu zeziseko zophuhliso, kufuneka uqwalasele uzinzo. Awufuni ukugcina ingxaki isuka kuyilo iye kulwakhiwo ukuya kwimisebenzi. Uninzi lwabathengi endisebenza nabo basondela kule ngxaki besuka kwi-engile eyahlukileyo ngokupheleleyo. Bayibiza ngokuthi "ubunjineli obubuyisela ingxaki".
Ukuba ujonga kuphela uloyiso lwexesha elifutshane, uya kugqibela ngokufumana idatha emininzi emnyama, eyenye yeengxaki. Njengomthengi, ufuna ukuba iprojekthi yakho ihambisane ngokupheleleyo ne-BIM.
Abanini bomsebenzi bazibuza le mibuzo mithathu:
Yintoni endiyidingayo ukuphatha ii-asethi, ngakumbi kuba yeyona ndawo indala yomjikelo wobomi beprojekthi?
Yintoni endiyifunayo kulwakhiwo, nokunxibelelana nolawulo lweeasethi?
Yintoni endiyifunayo kuyilo kunye nokwenzeka kwexesha, kunye nokunxibelelana nesoftware yolawulo lweprojekthi?
Ukufika apho, udinga iCDE: indawo yedatha edityanisiweyo,
Asiyommandla wedatha oqhelekileyo.
Zombini ezi nkqubo zitshintshiselana ngedatha kwiprojekthi, kodwa iMeko yeDatha edityanisiweyo (CDE) kuphela komthombo wenyani ofanelekileyo. I-CDE iya kulawula, isasaze, iqokelele kwaye igcine idatha kubo bonke ubomi bale projekthi. Obu bomi buluncedo bunokuba lide kakhulu kunokuba abantu becinga, ngakumbi xa ucinga ngenani lohlaziyo lwezinto ezinokudlula kwisithuba seminyaka engama-30. Ngokusisiseko, i-BIM iqinisekisa ukuba lonke ulwazi olufanelekileyo luyafumaneka kwifomathi efanelekileyo, ivumela iqela ukuba lenze ukhetho olufanelekileyo kubomi be-asethi yonke. Ingcinga ephosakeleyo, ngakumbi kwiintsuku zokuqala, yayikukuba i-BIM yayimalunga nokudala imodeli ye-3D ezimeleyo. Le ayisiyonyani. Endaweni yoko, i-BIM ngokuyintloko yindlela esekwe ngayo iprojekthi.
Kwiziko le-BIM kukho uxanduva oluphambili: iimfuno zolwazi zomqeshi. Ezi mfuno zichaza ulwazi olufuna ukuba umqeshi aluhlakulele ukuqhuba iiasethi. Umqeshi useka uxwebhu lwesivumelwano ekuqaleni, eqinisekisa ukuba ulwazi olufanelekileyo luyenziwa nokuba iinkqubo zisetyenziswa kuyo yonke iprojekthi.
Xa sithetha nge-CDE, ikota elandelayo kufuneka siyichaze ngamawele edijithali, oko kukuthi, oko kukuthi, imbonakalo yedijithali yeasethi ezibonakalayo, inkqubo, okanye inkqubo, kunye nolwazi lobunjineli olusenza siqonde kwaye siyimodeli yokusebenza kwayo. Ngokwesiqhelo, amawele edijithali anokuhlaziywa ngokuqhubekayo kwimithombo emininzi, kubandakanya izinzwa kunye nophando oluqhubayo, ukumela imeko yayo, imeko yokusebenza, okanye isikhundla kufutshane nexesha lokwenyani. Amawele edijithali avumela abasebenzisi ukujonga ii-asethi, ukujonga imeko, ukwenza uhlalutyo, kunye nengqondo yokuqikelela nokwenza umsebenzi weasethi.
Amawele edijithali asetyenziswa njengendlela yokwandisa ukusebenza kunye nokugcinwa kweeasethi ezibonakalayo, kubandakanya neenkqubo zazo kunye neenkqubo zazo. Njengoko ulwazi oluvela kumawele edijithali luhlalutya, izifundo ezininzi zinokufundwa, ukunika iqela ithuba lokubuyela elona xabiso liphezulu lezinto zokwenene.
Izifundo zinokufundwa ngokusetyenziswa kwedijithali ukubona ukuba leliphi ixesha elifanelekileyo lokulungisa izixhobo ngaphandle kokuchaphazela ukusebenza kwempahla. Xa usongeza ukongezwa kweenzwa kunye nobukrelekrele bokungqinisisa, ufumana uhlalutyo lwedatha yexesha lokwenyani kunye nokuthelekisa kwale datha kunye nembali yedatha.
NgokweMigaqo yeGemini epapashwe liZiko leDijithali eyakhiwe eBritani ngoDisemba 2018, iwele ledijithali "yimbonakaliso yokwenyani yedijithali yento ebonakalayo". Yintoni eyenza iwele ledijithali lahluke kuyo nayiphi na enye imodeli yedijithali kukunxibelelana kwayo newele lomzimba. " I-National Digital Twin ichazwa "njengenkqubo yendalo yamawele edijithali adityaniswe ngedatha ekwabelwana ngayo ngokukhuselekileyo."
Ukujonga kwakhona nge-imeyile iqabane lam elifumene kumthengi-osebenzisa umnini-ndlu, kuyacaca ukuba imibutho ifuna ukudibanisa kangangoko kunokwenzeka kwiqonga elisekwe lilifu elinye.
Ayisiyiyo kuphela ii-silos zengingqi zolwazi eziphindiweyo ezisusiweyo, zikwadala amandla okuvula ulwazi kwinqanaba elitsha lokusebenza.
Ii-CDE zidlala indima ekhokelayo ekunikezeleni eyona ndlela yokusebenza kunye nokuhamba komsebenzi wekhontrakthi kwicandelo lezokwakha. Esi sisiseko se-cufflink yedijithali.
Kutheni le nto ulwazi olungelulo olunolwazi lusenza iindleko kwiiprojekthi zakho
Iiprojekthi zokwakha ziya zisiba nzima kwaye isisombululo sisiso Indawo yedatha edityanisiweyo.
Emva kokuchitha impelaveki yosapho kunye nomhlobo ophuhlisayo owayenengxaki enkulu yeprojekthi yamva nje esixekweni, le meko yandenza ukuba ndicinge ngendlela zotshintsho eziguqukele ngayo kwaye ziya kutshintsha ngenxa yokuxinana kwabantu kunye nokufumaneka idatha. Mna nomhlobo wam sichithe impelaveki sithetha ngoyilo kunye neeprojekthi zokwakha. Ukuseta umnyhadala, iiparameter zeli candelo labucala lokuqeshisa (PRS) zazicacile ngokuthe tye.
Iingxaki zeprojekthi yomhlobo wam ngokubanzi, zazibangelwa sisixa sokuphinda sisebenze kwakhona kunye noxanduva, kuba kukho uthotho lweenguqu zoyilo. Ngale projekthi engqondweni, ndiye ndaqala ukuphanda ngendleko zokuphinda ndisebenze kwakhona kumzi mveliso.
Ukuba ufunda ezinye zezifundo zamanye amazwe, ezi ngxelo zicebisa ukuba iindleko ngqo ezivela kwiimpazamo ezinokuthintelwa malunga neepesenti ezi-5 zexabiso leprojekthi. Ukusebenza kwelo nani kwimarike iyonke, le pesenti yongeza ukuya kuthi ga kwi-5 yezigidigidi zeedola (i-USD 6,1 yezigidigidi) ngonyaka e-UK. Emva kokuthathela ingqalelo inani lezilumkiso zenzuzo ezikhutshiweyo, eli xabiso likhulu kunamanqanaba e-avareji uninzi lwenkontrakthi esebenza kwimarike yenkulumbuso.
Uphando olwenziwe yi-Get It Right Initiative (GIRI) ngo-2015 lubonisa ixabiso eliphezulu ngokumangalisayo. I-GIRI yaphuma kwiingxoxo kwiPaneli yeyona misebenzi miGqibeleleyo yeZiko leeNjineli zoLuntu. Xa kubandakanya indleko ezingasetyenziswanga nezingathanga ngqo, i-GIRI iqikelele ixabiso lokuba phakathi kwe-10% ne-25% yeendleko zeprojekthi, malunga ne-10-25 yezigidigidi ze-GBP (12-30 yezigidigidi zeedola) ngonyaka.
Uphando lwe-GIRI luchonge ezona zinto ziphambili zili-10 zempazamo, ezazize:
Utshintsho loyilo emva kwexesha
Ulwazi loqulunqo olubi
Inkcubeko embi ngokunxulumene nomgangatho.
Ulwazi loqulunqo olungelulo kakuhle
Unonophelo olungalinganiyo kuyilo lokwakha.
Uxinzelelo olugqithisileyo lwezorhwebo (lwezemali nexesha)
Ulawulo olubi kunye noyilo loyilo
Unxibelelwano olungasebenziyo phakathi kwamalungu eqela.
Izakhono zokongamela azonelanga
Ndifumene umxholo wolawulo loyilo unomdla. Uphando lwe-GIRI lubonise ukuba kukho ukunqongophala koyilo olungelelanisiweyo, okukhokelela kungqubano phakathi kwe-ofisi yoyilo kunye nonikezo loncedo kule ndawo, kukhokelela ekusebenzeni kwakhona, ukulibaziseka kunye nokunyuka kweendleko.
Nangona kunjalo, kukho isisombululo esilula kwiingxaki ezininzi eziboniswe kwingxelo ye-GIRI: iteknoloji esekwe kwilifu. Iinkqubo ezinje ngeProjekthiWise kunye neSYNCHRO zinokucutha ezi ngxaki ngokubonelela:
Indawo yokusebenza ekhuselekileyo nenokhuseleko apho amaxwebhu, uyilo, kunye neemodeli zinokujongwa kwakhona kwisiza kusetyenziswa izixhobo eziselfowuni, ezinjengeeselfowuni.
Ukukwazi ukulandelela kwaye ngaphandle komthungo qinisekisa ukuba izixhobo ezifanelekileyo ziya kufika kwindawo ngqo ukusuka kumzi-mveliso.
Iinkqubo ezinokubonelela ngoluhlu lokutshekisha kunye nekristali Ukuqinisekisa ukuba iprojekthi ihamba ngendlela eyiyo.
Nangona kunjalo, njengoko siye sabona kuphando lwamva luka-44.3 (olwaxoxwa kwinqaku lam elidlulileyo Vula izibonelelo zokuya kwiDijithali kulwakhiwo), nangona kunjalo, uninzi lweekhontrakthi azisebenzisi le teknoloji kubo. Uphononongo lukaMorton lufumanise ukuba phantse isiqingatha seenkampani (XNUMX%) sasinombono okanye sasingathethi ngenkampani okanye ngomsebenzi weprojekthi. Nangona isiqingatha sabaphenduli sasiqonda ukubaluleka kokuqokelelwa kwedatha yeprojekthi, abakwazanga ukuyisebenzisa kakhulu ngokwenza iidijithali. Iinkampani ezingasebenzisi inkqubo yeProjekthiWise ziphoswa:
Ukukhawulezisa ukuhamba komsebenzi kunye noyilo
Iinjineli ziqikelelwa ukuba zichithe ukuya kuma kwiipesenti ezingama-40 zemini yazo zikhangela ulwazi okanye zilinde ukulandwa kwefayile. Khawufane ucinge ukunika wonke umntu ukufikelela ngokukhawuleza kwidatha elungileyo xa kufuneka kwaye phi.
Lungelelanisa amaqela akho kwindawo edibeneyo yedatha ukunciphisa isiphazamiso sonxibelelwano. Fumana umbono opheleleyo lwayo yonke idatha kunye nokuxhomekeka ukuze wonke umntu abe nolwazi lwakutshanje.
Fumana ukuzithemba kunye nolawulo kwilifu
Qhagamshela iqela lakho leprojekthi kunye nonikezo lwenkonzo ngeenkonzo zamafu. Ukunciphisa iingxaki ze-IT, imiba yokuhamba kancinci yeWAN, ukucekeceka, kunye nokhuseleko lwedatha.
Ekugqibeleni, umhlobo wam kunye nam siye savuma, ngebhotile emnandi ye-porto, ukuba eyona ndlela ingcono yokuphepha ukuphinda kubize kakhulu ngokwenza idigital. Ngaphandle kwetekhnoloji yedijithali, iiprojekthi ziya kuchitha ixesha elibalulekileyo (kwaye ngenxa yoko iindleko) ziza kwaye zihamba notshintsho yoyilo.
Kutheni ufuna ukufumana inkqubo yoyilo echanekileyo
Umthombo omnye wenyaniso inokuphucula inkqubo yoyilo lwakho ukuhanjiswa kweprojekthi.
Njengabahambi abaninzi, ndisiya eLondon ndigqitha e-Euston. Ngezicwangciso zokwakha i-330 yeemayile zendlela entsha esandula ukusekwa, le projekthi ibangele ukuphazamiseka okuncinci kuhambo lwam ukuza kuthi ga ngoku. Kuba le projekhthi isebenzisa iProjekthi yeWebhusayithi ka-XNUMX, ndike ndacinga ukuba kuqhubeka ntoni emva kodonga lokwakha.
Kuya kuvela ukuba kukho amangcwaba amakhulu anezinto ezingaphezu kwama-40,000 zeentsalela zabantu apho iiplatifomu ze-Euston ze-HS2 ziya kuhlala ngenye imini. Into eyayisakuba yindawo yamanqanaba eSt James 'Gardens kungekudala iya kuba sisango apho oololiwe besuka eLondon kwaye abakhweli bekwazi ukuya kuma-225 mph.
Ukugcina umkhondo weeseti ezingama-40,000 zezidumbu zabantu kubonakala njengomsebenzi olula kule projekthi ye-epic ngokuthelekiswa nokwakha isango laseLondon ukuya kwi-HS2. Njengoko iqela lokuhambisa liqhuba, baya kuphuhlisa ukuqonda okufunekayo kwiimfuno zoyilo olusekwe ngumthengi kunye neqela loyilo ukuze bahlangane kuyilo loyilo, kubandakanya nefomathi kunye nomsebenzi weprojekthi.
Ukuba ndingumhambi emi kwisikhululo sangoku se-Euston, ndifuna ukujonga iphaneli yolwazi kwaye ndinqwenela uloliwe olibazisayo ukuba anikwe iplatifomu, ndiyazi kuqala ukuba lungakanani utshintsho oludingekayo kwisikhululo ukuze sisebenze ngokufanelekileyo.
Ngeli xesha, iqela lokuhambisa liza kusebenza kunye neqela loyilo ukuvela kunye nokwandisa okufunekayo ukuze kube yitoliko olunzulu loyilo kunye nemidwebo.
Njengoko omabini amaqela eqhubela phambili, kuzolile ngaphambi kwesiphango, phambi kwamaza e-choppy atshintsho kunye noyilo loyilo. Uyilo ngokutsha, imiba kunye noxanduva lunokubangela ukungevani phakathi kwayo nayiphi na uyilo kunye neqela lokuhambisa.
Olu hlaziyo luthatha ixesha elide ukuba iqela lenze kwaye lirekhode, kunye nokudideka ukuphonononga, ukuvuma, kunye nokuyalela ukuthengiswa kokunikezelwa.
Ukuba sibuyele ekuqaleni kwayo nayiphi na iprojekthi, hayi iprojekhthi enkulu yezibonelelo, umthengi uyakuzibandakanya neqela loyilo kwaye aseke isishwankathelo sokwenza le projekthi kufuneka izise. Ngaphakathi kolo shwankathelo, umthengi uza kuseka imisebenzi ephambili eliqela kunye neemfuno, ekufuneka uyilo luhlangabeze.
Ukudibana nomthengi kuya kulandela la manyathelo mane:
Isigaba sokusetyenzwa / sokwenziwa kwangaphambili
Imizobo yokwakha / Imizobo
Ndisakhumbula xa ndaqala kwishishini lokwakha. Emva phaya, olu nxibelelwano lwabathengi lwalunokwenzeka ngephepha, ivumba le-ammonia elivela kubakhupheli beligcwalisa igumbi njengoko belungisa iipakeji kwaye bazaphula phantsi kwezoluleko ezifunekayo. Namhlanje, yidatha kunye nemodeli ze-3D ezinokwenza izinto zibe nzima ngakumbi.
Nangona kunjalo, kukho isisombululo sokuphepha ezi ngxaki. Isoftware enjengeProjekthiWise kunye ne-SYNCHRO ivumela iqela loyilo ukwakha i-3D ngaphambi kokwakha nokusasaza loo datha ngendlela elawulwayo kunye nenentsebenzo. Olu qheliselo aluphuculi kuphela unxibelelwano phakathi kwabathathi-nxaxheba kunye neqela lonke loyilo, kodwa linokunciphisa noxinzelelo lokwahluka okwikhoyo kwiprojekthi nganye. Siyazi kwizifundo zethu, kunye nezo ziqhutywa ziinkampani ezinje ngeMcKinsey, ukuba iipesenti ezingama-20 zeeprojekthi ezinkulu ziyaphuphuma kwaye i-80% idlula uhlahlo-lwabiwo mali.
Isidingo sokulawula kunye nokunciphisa oku kwahluka kubalulekile.
Ukuba iimpazamo zoyilo zenziwe, iinkqubo ezikhoyo zenza kwalula ukulungisa loo mpazamo. Inqaku elibalulekileyo kukuba utshintsho kunye nolwazi kwabelwana ngalo ngokukhawuleza, ivumela iqela lokuhambisa kunye nonikezo lwentengiso ukuba lisabele ngendlela ebangela impembelelo encinci kwindawo.
Ukuba sijonga ingxelo yokugqibela evela kwiSebe lezeNdalo, Ukutya neMicimbi yaseMaphandleni (i-DEFRA), inkunkuma yokwakha ihlala iphakamile kwaye uninzi luphuma ekuphindaphindweni ngokutsha. Oku kuqhelisela kuya kugcina imali, ixesha kunye nezixhobo.
U-Mott MacDonald wazibona ezi zibonelelo xa waphumeza umthombo wodwa wenyani ngomsebenzi wakhe kwiProjekthi yeThames East yaseMpuma. Njengomyili okhokelayo, umbutho ujonge ukuphucula inkqubo yokuhambisa amanzi amdaka e London. Ukongeza kulawulo lweprojekthi ye- £ 4.000bn ($ 4.900bn) eyinkcitho, iMotd MacDonald yacelwayo umngeni ukuba uyihambise iminyaka emibini ngaphambi kweshedyuli. Nangona kunjalo, ukuba umbutho awunakuvumela ukusebenzisana okungenamthungo kulo lonke iqela leprojekthi eyandisiweyo, ibaleke umngcipheko wokuwela umva kunye nokusilela ekufezekiseni iindawo ezibalulekileyo.
Ukuze uphumelele, iMotDDonald kwafuneka iqinisekise ukuba lonke iqela leprojekthi yayo, ebandakanya amalungu avela kwimibutho eyahlukeneyo, imiyilo yoyilo, kunye neendawo, inokufikelela ngokulula kwaye itshintshiselane ngolwazi oluhlaziyiweyo kwindawo enokulawulwa kuyo. I-Mott MacDonald iphumeze esi sisombululo ngokudibanisa amalungu eqela lakhe kunye nokuyila umxholo kwindawo edibeneyo yedatha. Amalungu eqela kuyo yonke imiyalo eli-12 yoyilo ngoku angadala, ukuguqula nokugcina amawaka eendawo zokuhlangula kwindawo enye, ngokufikeleleka ngokulula yimibutho ethatha inxaxheba eYurophu, kubandakanywa nabathengi ukulungiselela uphononongo kunye nokuvunywa.
Ngokulungelelanisa ukusebenzisana kweprojekthi, iMotDDonald izise umgangatho ongcono kubathengi ngaphambi kweshedyuli kwaye yaqonda ukuba kukho:
I-32% yokonga ngexesha lokuyila yoyilo
I-80% yokufikelela ngokukhawuleza kumaxwebhu kunye nokuthenjwa ngabo bonke abathathi-nxaxheba
Ukuvunywa kweepesenti ezingama-76 kwepesenti yomthengi okokuqala.
Njengoko iikhompyuter zisusa uxinzelelo kwiinkqubo zoyilo, usetyenziso olunjenge-ProjectWise kunye ne-SYNCHRO kunokukunceda ulawule ngcono ulwazi lweprojeki ngokuseka umthombo omnye wenyani ukugcina ixesha kunye nokunciphisa umngcipheko ngokuqinisekisa ukuba ulwazi oluhlaziyiweyo Ukulandelela, ukulawulwa kunye nokufikeleleka kwiprojekthi yakho. Ukukhawulezisa ukusebenzisana kweqela nesoftware kunceda ukulungelelanisa iqela lakho kwimeko yedatha edityanisiweyo. Iya kuphucula imveliso kwaye iqinisekise ukuba ulwazi luyalandelelwa kwaye lulawulwa ngokusebenza ngokusebenzisana.
Ulawulo lweprojekthi olungcono lungakhokelela ekuqondeni okungcono ngezigqibo ezenziwa ngexesha elinolwazi kunye nolwazi. Iya kukuvumela ukuba woyise imiqobo enokubakho kule projekthi ngelixa usandisa ukubonakala kwayo ngokubanzi. Emva kwengxelo yakutshanje ye-Crossrail evela kwiKomishini yeeA akhawunti zikaRhulumente ziye zagxeka abaphathi bekhontrakthi kule projekthi, kucacile ukuba sikhona isidingo esikhulu sokucacisa zonke iiprojekthi, kubandakanya nesikhululo sikaloliwe esitsha sase-Euston kunye neHS2 .
Umthombo wodwa wenyaniso unokuguqula njani ishishini loyilo lwezibonelelo
Ngokokufakwa kweedatha ezininzi kakhulu kunye neenzwa, akukaze kubaluleke kakhulu ukuba abaqulunqi kunye neekhontrakthi basebenzise umthombo omnye wenyani.
Kutshanje kwisiXeko saseNew York, siye safunda ukuba ukwakhiwa kwezakhiwo eziphakamileyo zeglasi kunokuvalwa njengenxalenye yephulo lokunciphisa ukukhutshwa kweegesi zegreenhouse ngama-30%. USodolophu uBill de Blasio uthe i-skyscrapers ephambi kweglasi "ayisebenzi ngendlela emangalisayo" kuba amandla amaninzi aphuma ngeglasi.
U-Blasio uceba ukwazisa umthetho oyakuthintela ukwakhiwa kwee-skyscrapers ezintsha zeglasi kwaye ufuna ukuba izakhiwo ezikhoyo zeglasi zenziwe zanamhlanje ukuze zihlangabezane nezikhokelo zekhabhoni entsha kunye neyomeleleyo.
Uxinzelelo kuluntu loyilo ngoku lukhulu ngakumbi. Sibonile amaxesha amaninzi ukuba iiprojekthi zoyilo zanamhlanje zinobunzima kwaye zifuna kakhulu kunangaphambili. Nangona kunjalo, kuba oosodolophu besi sixeko bayanda ukuthetha malunga nokuyilwa kunye nokusebenza, kubandakanya uSodolophu waseLondon uSadiq Kan ukwala izicwangciso zezona zinto zincinci zabakhwetha ezenziwe ngooFoster + Amahlakani, abaqulunqi kufuneka babuyele etafileni. uyilo lokuyila okungafunekiyo kobuhle kuphela kodwa nakwezentlalo nakokusingqongileyo
Ngomthetho osayilwayo we-de Blasio, sinokubona ukwanda kweesenors kwiiprojekthi zethu, iindaba ezimnandi zamawele edijithali kunye namawele okusebenza. Nangona kunjalo, ulwazi olufunekayo kuyilo kunye neqela lokuhambisa luhambile ngokuqinileyo ukubeka iliso kwitekhnoloji entsha. Njengoko ezi projekthi zikhula ngokobukhulu kunye nobunzima, kunjalo ke nobungakanani beqela lokuhambisa. Ngokulandela yonke imizobo, iipakeji zolwazi zinokuba nzima kakhulu kuneprojekthi ngokwayo.
Kukho isidingo esikhulu solawulo loyilo lweprojekthi ukusuka kwinqanaba lokuqala leprojekthi, ukuvumela iqela ukuba lilawule ukukhutshwa kokuhamba kolwazi. Ngesixa esikhulu sedatha ngoku eqhotyoshelwe kwiprojekthi, kufuneka imithombo enye yenyani yokwenyani efunekayo. Unokufunda ngakumbi ngezi zihloko ngokufunda amanqaku am angaphambili kwiidatha zedatha (Kutheni kufanelekile ukuphepha idatha yesilver yokujonga iprojekthi ye-truer) kunye nedatha enkulu (Digitizing ngeDatha enkulu). Lo mthombo wodwa wenyani kufuneka ulawule konke ukuhanjiswa kweprojekti ngelixa uhambelana neenkqubo zesivumelwano. Ukuhamba komsebenzi kunokuhambelana nesicelo sokutshintsha okanye umahluko olula. Elinye lala maxwebhu liya kuba neendlela zalo ezilandelekileyo kunye nokuvalwa kwalo kugqityiwe.
Ishishini lokwakha sele liceliwe ukuba lenze uvimba omnye wolwazi, umthombo omnye wenyaniso. E-UK, urhulumente utyhala ukuba ishishini libonelele 'ngentambo yegolide yedatha', okuthetha ukuba isakhiwo ngasinye kufuneka sibe nerekhodi yedijithali yazo zonke ii-asethi. Njengoko abantu abaninzi beqela loyilo kunye nokuhanjiswa bayacelwa ukuba baqokelele idatha, indlela engcono kakhulu yokulawula le datha yedatha ngokusebenzisa ulawulo lwekhontrakthi usebenzisa i-workflows ecacileyo kakhulu kwaye echazwe kakuhle.
Sebenzisa imo yedatha evulekileyo nexhunyiwe kwindawo ekusetyenzwa kuyo kufuneka ukuba inike iqela ukusayinela elinye ukuphatha yonke idatha. Kulapho indawo esekwe kwiProjekti esekwe kwiVenkile yeNdawo eyiDityanisiweyo yaseKhaya inakho ukunceda kulawulo lwedatha kwaye inike umthombo wenyani, ngelixa ibhetyebhetye kakhulu ekusebenziseni kwansuku zonke.
Indawo yedatha edityanisiweyo isitshixo kuyo nayiphi na iprojekthi. Iyanciphisa uxinzelelo kwaye inike iqela ukufikelela kulo lonke ulwazi oluyimfuneko, nokuba ngaba kuyilo lemicimbi, ii-RFI, izicelo zotshintsho okanye amaxwebhu esivumelwano. Olu lwazi lungajongwa njengephepha le-PDF okanye imodeli ye-3D.
Sebenzisa ukuhanjiswa komsebenzi okusekwe, amaqela eqela azakubona ngokuzenzekelayo utshintsho oluyimfuneko kwinkqubo yesigqibo, ebavumela ukuba benze isigqibo ngokukhawuleza.
Ukusetyenziswa kwenkqubo esekwe lilifu kuthetha ukuba iqela linokufikelela ngokupheleleyo kuwo onke amaxwebhu, ngesixhobo esikwisayithi okanye kwikhompyuter idesktops eofisini. Obu buchule bugcina wonke umntu eyazi ngokupheleleyo inkqubela phambili yeprojekthi.
Ukusebenzisa umthombo wodwa wenyaniso kunciphisa inani leempazamo xa ususa idatha kwenye inkqubo uye kwenye. Eli nqaku linciphisa nexesha elichithwe ukukhangela ulwazi oluchanekileyo, ukunciphisa inani lokuphinda kubangelwe ziimpazamo kwisiza.
Ukuhamba komsebenzi ofunekayo kuya kwahluka kwiprojekthi, ngenxa yeemfuno zesivumelwano kunye nezicelo zonxibelelwano zabathengi. Ke ngoko, ukudalwa kokuhamba komsebenzi kufuneka kube lula kwaye uguquke ukuze, njengenkampani, ugcine uxanduva lwakho kwifomathi efanelekileyo. Sebenzisa inkqubo efana neProjekthiWise iya kunika ukubonakala okungcono kunye nokuhamba komsebenzi olawulwayo. Ke ngoko, ngokubonelela ngedatha ephambili kunye neyona nto ibalulekileyo, ukuqikelela kunye neengxabano kuya kupheliswa
Umzekelo wombutho obusebenzisa iProjekIWe yokubonakala okungcono kunye nokuhamba komsebenzi olawulwayo kukusebenzisana phakathi kweDragados SA kunye neLondon Underground Limited.
Imibutho yayiphethe uxanduva lokujonga iprojekthi I-6.07 yezigidigidi ye-GBP ($ 7.42 yezigidigidi) yesikhululo sebhanki-Monument, yenye yeendlela zase-UK ezingaphantsi kololiwe.
Ukuze uphumelele, iDragados kunye neLondon Underground ziyafuneka ukulawula inethiwekhi eyandayo yamaqabane eprojekthi, kubandakanywa nabasebenzisi abangama-425 umntu ngamnye Iinkampani ezingama-30 ezahlukeneyo, Ukuqinisekisa ukuba amawaka iimveliso zoyilo zenziwe, zahlolwa kwaye zamkelwa ngaphandle kwesigameko.
IZIXHOBO ZEEMPAHLA ZOKUZONWABISA ZADALWA, ZABONELWA NOKUZIPHATHA NGENXA YOKUQINISA
Thatha uVavanyo lweDigital Digital kwaye ubone indlela onokuthi uqhubele phambili ngayo kwishishini lakho.
Umbhali | IiMark Coates
UMlawuli weNtengiso yeZimbiwa kunye nokuHanjiswa kweeProjekthi
IiNkqubo zeMpahla esisiseko ngumnikezeli ophambili wezisombululo zesoftware zeeNjineli, abavelisi bezakhiwo, iingcali zezobuchwephesha, abakhi, kunye nabanini bomnini zakhiwo zoyilo lwezixhobo, ezokwakha, kunye nokusebenza. Izinto zobunjineli ezisisiseko zeMicrosoftStation esekwe kubuGcisa kunye neBIM, kunye neenkonzo zayo zeTwin Cloud, ukuhanjiswa kweprojekthi kwangaphambili (iProjekthiWise) kunye nokusebenza kweeasethi (ii-asethi) zezothutho kunye neminye imisebenzi kawonkewonke, izinto eziluncedo, izityalo zamashishini nezamandla ombane Izixhobo, kunye namaziko orhwebo kunye namaziko.
I-Systems ka-3,500 isebenzisa ngaphezulu kwama-700 170 oogxa bayo, ivelisa ingeniso yonyaka yezigidi ezingama-1 zeedola kumazwe angama-2014, kwaye ityale imali engaphezulu kweedola ezili-1984 lezigidi kuphando, ekuphuhliseni nasekufumaneni izinto ukusukela oko yaqala ngo-XNUMX, inkampani ihleli inabaninzi ngabanikazi abahlanu bakaFineral abasungula. Izabelo ze-XNUMX zibanjwe ngesimemo kwintengiso yabucala ye-NASDAQ.